Iyo watchOS 3 inounza iyo nguva kuverenga nezwi | Ndinobva mac
Rondedzero maererano neremangwana masisitimu eApple zvishandiso inoramba ichibuda kubva kunotevera kudonha. Masystem mana matsva ekushandisa, macOS Sierra, iOS 13, tvOS, uye watchOS 10 zvakafumurwa kuKeynote munaJune 3. Vagadziri veApp vave kutotarisa ruzivo rwusina kuverengwa muKeynote. uye zvaive pachena kuti Apple ine makadhi mazhinji emusango pasi petafura.
Mune ino kesi, isu tiri kuzotaura nezve imwe tsananguro iyo isina kutumidzwa muKeynote nezve newatchOS 3. Sezvaunoziva, avo vanobva kuCupertino vakatiudza nezve kuvandudzwa uko Apple Watch maererano nekukurumidza kwekushanda, kunatsiridzwa kwakaitwa kune iro Chiitiko app kana kusvika kweiyo nyowani yekunyora system inonzi Scribble.
Nekudaro, zvinhu zvitsva zviri kuoneka zvisina kutaurwa nemazita pakuratidzwa kwesystem. Kana zvakataurwa kuti kunetsekana kwakagadziriswa uye kuti ikozvino zvaive nyore kushandura kumeso kwewachi kuwedzera kune izvo, semuenzaniso, munzvimbo yaMickey, yaMinnie inogona zvakare kushandiswa.
Vatinoshanda navo paPad News vanenge vatoyedza watchOS 3 uye vaona chimwe chinhu chingangosvika neyekupedzisira vhezheni yeOSOS 3 uye inogona kuzoshandiswa nevamwe vanogadzira mune zvimwe zvinoshandiswa. Sezvauri kuona muvhidhiyo yatinobatanidza, Kana isu tikatsikirira pamutumbi waMickey kana Minnie, iyo Apple Watch inodudza iyo nguva iri muSpanish yakakwana.
Chichava chitsva chinowanikwa kuti avo veCupertino vanozoenzanisa kubva pane inotevera vhezheni yeWOSOS?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo watchOS 3 inounza iyo nguva kuverenga nezwi